Kooxda Arsenal oo shaqada Tababaranimo Ka Ceyrisay Macalin Unai Emery,Yaa Booskiisa Qaban Doono – Bandhiga
Kooxda Arsenal oo shaqada Tababaranimo Ka Ceyrisay Macalin Unai Emery,Yaa Booskiisa Qaban Doono
Kooxda Arsenal ayaa ceyrisay tababare Unai Emery ka dib natiijooyin xunxun oo isku xigxigay uu wajahay iyado ay u dasnbeysay guuldaradii 2-1 ee ka soo gaartay Eintracht Frankfurt koobka Europa League kulankii Emirates Stadium.
Emery ayaa kooxda ka badaly Arsene Wenger 2018 laakiin wuxuu kaliya maamulay kooxda 18 bilood oo qura.
Maamulka kooxda waqooyiga London ka dhisan aya wariyay in cayaartoygodii hore Freddie Ljungberg uu si ku meel gaar ah usii leeylin doono kooxda.
Isaga oo ku hadlaya magaca kooxda Arsenal iyo milkiileyaasheeda, Josh Kroenke wuxuu yiri: “Mahadcelinta ugu sareysa waxaan u mahadcelinaya Unai iyo asxaabtiisa oo aan ka quusan dadaalkooda ay ugu doonayaan inay kooxda ku soo celiyan tartankii aan fileynay oo dhan Waxaan u rajeyneynaa Unai iyo kooxdiisa wax kale iyo guushoda mustaqbalka. ”
“Go’aanka waxaa loo qaatay natiijada iyo qaab ciyaareedkii oo aan ku jirin heerkii loo baahnaa.
“Waxaan weydiisanay Freddie Ljungberg inuu qabto masuuliyada kooxda koowaad isagoo ah macalinka kumeelgaarka ah waxaan si buuxda ugu kalsoonahay Freddie inuu na hormarinayo’’.
“Waxaa socda baadi goobka tababare cusub waxaana sameyn doonaa ogeysiis dheeri ah marka howshaas ay dhamaato.”
Kooxda Gunners ayaa guuleysatay kaliya afar ka mid ah 13 kulan oo ay ciyaareen Premier League xilli ciyaareedkaan, waxaana ay haatan ku jiraan kaalinta sideedaad, iyago sideed dhibcood ka dambeeya boosaska Champions League logu so baxo.